फेसबुक वास्तविकता-२ - शखदा साहित्य
5:53 PM कथा
'सरी यार नरिसाउन मेरो माया गछ्यौ हैन ?'
'तिम्रो विस्वास चाहिँ अझै गर्दिन । तिमीले पूरा अक ल्याएका नै छैनौ ।'
'हैन यार, डेटिङ्गको कथा पनि पूरा भइसकेको छ । अब त विस्वास गर न यार ।'
'हेर न मेरो शरीर पुरै दुखेको छ पहाडको उकालो चढदाचढदा मेरो माया लाग्दैन । तिमी भए मेरो जीउ मिचिदिन्थ्यौ होला हैन ?'
'तिमीले मलाई पक्कै नोकरानी बनाएर राख्न बेर छैन । बरु भनन लिभिङ्ग टुगेदर गर्ने नयाँ फैसन, नयाँ जमाना, सबै कुरा नयाँ ।'
'वर्ल्डकपमा विजेता बनाउन नत्र भने नेपालको राजनीतिमा नया पार्टीपर्छ सबै मन्त्री हाम्रा छोराहरू ।'
'तिमीलाई चाहिँ नेपाल बन्दमा - कहिले तिम्रो फोन बन्द कहिले च्याट बन्द...। अँ...हेर न अहिले एउटा फ्रैन्डस रिक्वेस्ट आएछ । एसेप्ट गरेको त कस्तो छाडा फोटोहरू रहेछन् ।'
'व्याभिचार बदमाश फटाहा !'
'यो फोटोको प्रोफाइल बनाउनेलाई । तिमी हेर्यौ भने छक्क पर्र्छौ कस्तो हेर्न नसकिने अश्लील फोटाहरू ?'
'छाडा जति खेर पनि उही कुरा ......।'
'अझै एक हप्ता छ यार यहाँ बस्न यार ।'
'बस न बस । के भो र त्यहाँ छेउछाउमा जङ्गल होला । तिम्रो रुख चढने साथी भेटिहालिन्छ नि Û पसुपतिको जगलमा जस्तै।'
'एउटा कुरा भनु ?
'पख पख ल गएर त हेर ?'
'म हराए कि तिमी ?'
'अँ.. भन्दै जाऊ आफ्ना कुरा म सुन्छु । अनि पत्रिका निस्केको तिम्रो सेक्स हेरेसमेन्टको इस्यु के भयो नि !'
'अनि ऊसँग ठट्टा गर्दै यस्तै च्याट गर्न थाले । पछि थाहा भयो ऊ त मेरै अफिस कि रहिछ र मलाई फसाउन यो सब गरेकी रहिछ अहिले मेरो केस अदालत गएको छ । आइ एम सो स्याड दीपा...!'
'भैगो तिमीले मेरो भावानामा यति ठूलो खेलवाड गर्यौ म सोच्थेँ तिमी मलाई यति धेरै माया गछ्यौ र यति धेरै प्रणय संवादहरू गर्दैछौ, म तिम्रै शब्दहरूमा हराउने गर्दथे । तर .....!'
'तर जब तिम्रो सेक्स हेरेसमेन्टको इस्यु पत्रिकामा छापियो । म टुक्रिए । तिमीप्रतिको मेरो प्रेम जलेर खरानी भयो ।'
'साँच्चै भनू तिमीसँगको संगतले मैले धेरै कुरा सिकेको छु । पहिलो कुरा त म डिजिटल प्रेमलाई कहिले विश्वास गर्दिन जुन तिमीसँग कायम भएको थियो । '
सर्म्पर्क टुट्छ ।